သြော်… နာဂစ်.. နာဂစ်….
ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာပဲ ကြိုတင်ကြေငြာထားတဲ့အတိုင်း နာဂစ်အမည်ရတဲ့ လေမုန်တိုင်းက ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကို ပတ်ပြီးမွှေ့ရမ်းတိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာမှလည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိ၊ များများစားစားလည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့မရလိုက်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး ဖရိုဖရဲကြီးကို ဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အရုပ်ကြိုးပြတ်သစ်ပင်တွေ၊ ထက်ပိုင်းကျိုးကျနေတဲ့ ဓါတ်တိုင်တွေ၊ ပြတ်တောက်သွားတဲ့ တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ၊ ရပ်တန့်သွားတဲ့ Internet Service တွေနဲ့ ၃ရက်နေ့ဟာ လူ့ယဉ်ကျေးမှုမထွန်းကားသေးတဲ့ ခေတ်ကို ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ သူရဿဝါဆိုလည်း အိမ်ထဲမှာပဲ ငြိမ်ကုပ်ပြီး နာဂစ်အကြောင်းတွေပဲ စဉ်းစားနေရပါတယ်။ အဲဒီတော့လည်း နာဂစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒါမှမဟုတ် နာဂစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီး စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်၊ ဟိုရောက်ဒီရောက် အတွေးတွေပဲ ထွက်လာပြန်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နာဂစ်ကိုအကြောင်းပြပြီး မိုးတွေရွာနေခဲ့တာ သုံးလေးရက်ဆက်တိုက်ပါ။ ၂ရက်နေ့မှာတော့ နာဂစ်ရဲ့ သတင်းက ပိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂ ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီး နာဂစ်ဆိုတဲ့မုန်တိုင်း ကျမယ်ဆိုလို့ လူတွေအားလုံး လှုပ်လှုပ်ရွရွပါ။ သူရဿဝါကလည်း အဲဒီနေ့မနက်ကတည်းက အိမ်မှာမနေဘဲ လျှောက်သွားနေခဲ့တာပါ။ တွေ့သမျှသူငယ်ချင်းတွေကလည်း `မုန်တိုင်းရှိတယ် အိမ်စောစောပြန်´ ဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ သူရဿဝါကတော့ အေးဆေးပါပဲ။ ခါတိုင်းလည်း မုန်တိုင်းသတင်းကြေငြာချက်တွေ ကြားနေကျ၊ တကယ်တမ်း မုန်တိုင်းဆိုပြန်တော့လည်း အဖျားခတ်ရုံ မိုးပဲရွာပြီး ပြီးသွားတာဆိုတော့ ခါတိုင်းလိုပဲ `နင်လည်းနင့်ဟာနင်နေ ငါလည်းငါ့ဟာငါနေမယ်´ သဘောထားပြီး နေခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ညနေလေးနာရီ လောက်ကျတော့ အိမ်ကစိတ်ပူနေပါ့မယ်လေဆိုပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ငါးနာရီလောက်မှာ မိုးကလည်း ခဏတိတ်သွားတော့ ခါတိုင်းလိုပဲ ပြီးသွားမယ်ထင်ပါရဲ့ ဆိုတဲ့အတွေးက ပိုသေချာလာတာပေါ့။ ညကျတော့လည်း ထမင်းစားပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အချိန်အထိ မိုးလေးတစွတ်စွတ်ရွာနေတာကလွဲလို့ ဘာမှထူးထူးခြားခြား မဖြစ်ခဲ့ပြန်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့အိပ်ချိန်ရောက်လာတယ်။ သူရဿဝါလည်း မနက်ကျရင်သွားစရာရှိတယ်ဆိုပြီး ခပ်စောစောဝင်အိပ်ပါတယ်။ ညသန်းခေါင် ၂ နာရီလောက်မှာ နာဂစ်ကစပြီး အစွမ်းပြတော့တာပဲ။ ဒါတောင် သူရဿဝါ ဘာမှသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်တာမှ သိုးနေတာပါပဲ။ အမေကလာနှိုးရှာတယ်။
`ဟဲ့ သား ထစမ်း ထစမ်း မုန်တိုင်းကစပြီ သားရဲ့ လေတိုက်တာများ ပြင်းလိုက်တာ သိလား´
သူရဿဝါလည်း ၀ူးဝူးဝါ၀ါးထလာပြီး အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ မိုးတော့မပါသေးဘူး။ လေတွေကတော့ တကယ့်ကိုအပြင်းစားနှုန်းနဲ့ တိုက်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူရဿဝါအကြောင်း သိတယ်မဟုတ်လား။ အရမ်းအိပ်လို့ကောင်းတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ သူ့ဟာသူမုန်တိုင်းမကလို့ နူကလီးယားဗုံးကြီးပဲ ခွအိပ်ခိုင်းခိုင်း ပြန်ထမယ့်ကောင်စားမဟုတ်ဘူးလေ။ အမေနဲ့ အဖေ့ကို မျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ပဲ တစ်ခွန်းထဲပြန်ပြောပြီး အိပ်ရာထဲပြန်ဝင်သွားလိုက်တာ အမေတို့ခမျာ ဟမ် ခနဲ ကျန်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။
`အမေတို့ကလည်းဗျာ လေတိုက်တာများအထူးအဆန်းလုပ်လို့ အကောင်လိုက်မြင်ရတာကျနေတာပဲ´
အဲဒီတစ်ခွန်းထဲပြောပြီး ပြန်ဝင်အိပ်နေတော့တာပါပဲ။ အဲ… မနက်အစောကြီး ခြောက်နာရီလောက်ကျမှ သူရဿဝါရဲ့ ဇာတ်လမ်းကစတာပါ။ ၀ရန်တာဘက်ကိုထွက်တဲ့တံခါးပေါက်ကို ခေါင်းထိုးပြီးအိပ်တာဆိုတော့ ပြီးရောပေါ့လေ။ ခေါင်းက လေအရမ်းတိုက်တာခံရလွန်းတော့ အေးခနဲ အေးခနဲနဲ့ ဘယ်သူများငါ့ကို ခေါင်းတုံးလာတုံးနေလဲဟ ဆိုပြီး အလန့်တကြားထလာလိုက်တာ။ အပြင်ကိုလည်းကြည့်ရော ကမ္ဘာပျက်သလို မြင်ကွင်းကို မြင်ရတော့တာပါပဲ။ မိုးတွေ လေတွေ ဒီလောက်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တာမျိုး တခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူး။ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်နေရင်းမှာပဲ အ်ိမ်ရှေ့ အိမ်က စလောင်းကြီးကျိုးထွက်သွားတယ်။ ဘေးအိမ်က ခေါင်မိုးတွေ တဖျတ်ဖျတ်လန်ကုန်တယ်။ `အော်… ကျွတ် ကျွတ် တော်တော်အဖြစ်ဆိုးတာပဲ´ လို့ တစ်ယောက်တည်းရေရွတ်ပြီး အဲဒီအိမ်တွေကို သနားနေမိပါတယ်။ သနားနေရင်းကနေ ကိုယ့်အိမ်အောက်ကိုယ် ငုံ့ကြည့်မိမှ `အမယ်လေးဗျာ´ ဆိုပြီး တစ်ခွန်းပဲ အော်နိုင်တော့တယ်။ သူရဿဝါတို့အိမ်အောက်ထပ်လည်း တ၀က်လောက်ရေမြုပ်နေပါပြီ။ နေ့လည်တစ်နာရီလောက် မိုးရောလေရောတိတ်သွားမှ လူတွေအကုန်လုံး ပြူတစ်ပြူတစ်နဲ့ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ ကိုယ် အသီးသီး လက်ပစ်ကူးပြီး ထွက်လာကြပါတယ်။ သူရဿဝါလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပေါ့။ ဒါတောင် သူရဿဝါခြေသလုံးကို မြွှေထင်ပြီးပြေးတဲ့သူက ရှိသေးတယ်ခင်ဗျ။ အိမ်ရှေ့ မှာလဲနေတဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ သစ်ကိုင်းတွေကို ရှင်းလိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်ကိုမောရော။ ဒါတောင် သူရဿဝါရဲ့ ပေါက်ကရပါးစပ်က အငြိမ်မနေနိုင်ဘူး။ အမေ့ကိုလှမ်းပြောလိုက်သေးတယ်။ `ခုနေများ သမ္ဗာန်တစ်စင်းလောက်ရရင်ကောင်းမှာ ပဒေသာနဲ့ နန္ဒ၀န်ဈေးကို ခေါက်ပြန်ဆွဲပြီး စီးပွားရှာလိုက်ရရင် ထောပြီပဲ´ လို့။ ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်။ နည်းနည်းလေးမိုးသည်းတာတောင် အဲဒီဘက်တွေက ရေမြုပ်တာ။ ခုလိုအချိန်မျိုးသွားကြည့်ရင်တော့ လူတွေရော၊ အိမ်တွေပါ ရေပေါ်မှာ ဘောလောလေးတွေပဲနေမှာ။ တစ်နာရီလောက်ကြာအောင် ရှင်းကြလင်းကြပြီးတော့ လူတွေအားလုံးလည်း မောသွားကြတယ်ထင်ပါရဲ့ ။ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့လေးတွေမှာကိုယ် ငုတ်တုတ်လေးတွေထိုင်ပြီး ငြိမ်နေကြပါတယ်။ သူရဿဝါက အဲဒီကျမှ တစ်စခန်းထတာ။ အမှန်ပြောရရင်တော့ အစဆွဲထုတ်တာပါ။ မတ်တပ်ထရပ်ပြီး တစ်ယောက်တည်းပြောသလိုလိုနဲ့ အားလုံးကြားအောင် လျှောက်အော်တာပါ။ `တောက်! တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ နာဂစ် နာမည်ကအစ ကျက်သရေမရှိတာ တခြားမုန်တိုင်းနာမည်လေးတွေများ ကြည့်ပါလား အယ်နီညိုတဲ့ လာနီညာတဲ့ နာမည်လေးကြားရုံနဲ့တင် အတိုက်ခံချင်စရာ ခုတော့လား နာဂစ်တဲ့ နာလည်းနာဦးမယ် ဂစ်လည်းဂစ်ဦးမယ် ဘယ်လိုလှည့်ခေါ်ခေါ်ကို ကျက်သရေမရှိတဲ့နာမည် ဒီကြားထဲဒင်းက နာမည်လေးမလှလို့များ ကရုဏာသက်အောင်နေမလားမှတ်တယ် ဟွန်း မပြောလိုက်ချင်ဘူး တ၀ုန်းဝုန်းတဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ မယားပါသားနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ ပထွေးကျနေတာပဲ ငါတို့စုဗူးက ကိုဖြိုးနွယ်ကြီးမူးတာတောင် သူ့လောက်မလန်ဘူး… အဲ.. အဲလေ.. ခေါင်မိုးတွေပြောပါတယ် ကိုဖြိုးနွယ်ကြီးတောင် သူ့လောက်မသောင်းကျန်းဘူး´ တစ်ခွန်းတည်းပါ။ သူရဿဝါပြောလိုက်တာ တကယ့်ကိုအဲဒီတစ်ခွန်းတည်း။ ဒေါနဲ့မောနဲ့ မျက်နှာကို မဲ့ရွဲ့ ပြီးတော့ကို ပြောပစ်လိုက်တာ။ စကားဆုံးသွားတော့ အားလုံးခဏငြိမ်နေကြသေးတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းလေးတွေ မတ်လာကြတယ်။ အဲ… နောက်တစ်ဆင့်လည်းကျရော……
`ဟုတ်ပတော်… အယ်နီညိုတို့ လာနီညာတို့….´
`အေးဗျာ အရင်ကဆိုလည်း တိုင်ဖွန်းတို့ ဆိုင်ကလုန်းတို့….´
တစ်လမ်းလုံး ပါးစပ်မုန်တိုင်းတွေတိုက်လိုက်ကြတာများ ညကထက်တောင် ပြင်းသေးတယ်။ မုန်တိုင်းတွေ လှိုင်းလုံးတွေကိုများ အားရပါးရနာမည်ခေါ်ပြီး ပြောလိုက်ကြတာ တကယ့်ကိုဆွေမျိုးရင်းချာကြီးတွေ ကျနေတာပဲ။ သူရဿဝါကတော့ ဘာမှထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ စပြောခဲ့တာ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အတိုင်း အိမ်ထဲကိုပဲ ကုပ်ကုပ်ကလေး ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ ညဦးပိုင်းကျတော့ အဖေက ပြောတယ်။ နာဂစ်က ယိုးဒယားရောက်သွားပြီတဲ့။ သူရဿဝါလည်းအဖေ့ကို နောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့…..
`ဟုတ်လား.. ဒါနဲ့ အဖေ့ကိုရော နှုတ်ဆက်သွားသေးလား´
`သူကျတော့ မိုက်တယ်နော် ဗီဇာတွေဘာတွေမလိုဘူး ဖွတ်ကနဲပဲ´
`အဖေ့ဖို့ အပြန်လက်ဆောင်လေးဘာလေး ၀ယ်လာဖို့ရော မမှာလိုက်ဘူးလား´
`ဘာကွ… မင်း.. မင်း…´
နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာ။ စိန်ပြေးလိုက်တမ်းပေါ့။ သူရဿဝါကတော့ အေးဆေးပါပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ။ ဘာမှပြန်လုပ်လို့ မရတော့တာတွေတွေးပြီး စိတ်ညစ်နေမယ့်အစား ပျော်ပျော်နေပြီး ပြန်တည်ဆောက်ကြတာက ပိုကောင်းတာပေါ့။ အဲဒီလိုပဲ ခံယူပါတယ်။
နောက်ထပ်တွေးမိတာကတော့ အဲဒီနာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာ မွေးတဲ့ကလေးတွေလည်း ရှိချင်ရှိနေမှာလို့ သူရဿဝါတွေးမိပါတယ်။ ရှိလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ သူရဿဝါသာဆိုရင်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ မွေးတဲ့ကလေးတွေကို အတိတ်ကောင်းနိမိတ်ကောင်း ယူတဲ့အနေနဲ့ မောင်နာဂစ်တို့ ၊ မနာဂစ်တို့ဆိုပြီး နာမည်ပေးပစ်လိုက်မှာပါပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ။ မုန်တိုင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ မွေးတဲ့ကလေးဟာ မုန်တိုင်းလိုပဲ ကြံ့ ခိုင်သန်စွမ်းပါစေဆိုတဲ့ အတိတ်နဲ့ မောင်နာဂစ်၊ မနာဂစ်ဆိုပြီး ပေးမှာ။ ဘယ်လောက်လှသလဲ။ စနေနေ့မှာမွေးတဲ့ မောင်နာဂစ်ကလေးဆိုတော့ နေ့တွေနံတွေလည်း သင့်ပြီးသား။ ကြီးလာလို့ စာရေးဆရာတွေဘာတွေ လုပ်မယ်ဆိုလည်း ကလောင်နာမည်ထူးပြီး ရွေးနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါလေ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း ၊ လူတွေအားလုံးရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ မန်ယူ၊ ရှာရာပိုဗာ၊ ဟီလာရီကလင်တန်၊ ဟော့ရှော့ ဆိုတာတွေထက် နာဂစ်ကတော့ နေရာယူထားဦးမှာပါပဲ။ ဒီထက်ပိုဆိုးရင် `နာဂစ်နဲ့တွေ့သလို ဘာဖြစ်သွားမယ် ညာဖြစ်သွားမယ်´ ဆိုပြီး ဘန်းစကားတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။ သမီးရည်းစားတွေဆိုလည်း ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို `ကိုယ့်အချစ်က နာဂစ်လိုပါအချစ်ရယ်….. ပြင်းထန်တယ်.. အားကောင်းတယ်… နာဂစ်လိုပဲ ထွားထွားကြီးအချစ်ရဲ့ ´ ဆိုပြီး ချစ်သက်သေထူတာတွေဘာတွေတောင် ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်။ ဒီထက်တဆင့်တက်ပြီး စီးပွားရေးသမားတွေ မျက်စိကျသွားရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း နာဂစ်တီရှပ်တို့၊ နာဂစ်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တို့ ၊ နာဂစ်ဆီးထုပ်တို့တောင် ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခုတောင် နာဂစ်ကိုအသုံးချပြီး သူရဿဝါအတွက် ပို့စ်တစ်ခုရသွားပြီမဟုတ်လား။ သြော်… နာဂစ်.. နာဂစ်….
အဲဒီလမ်းလေးရှေ့ မှာပဲ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်
မသေချာခြင်းနဲ့ရူးမိုက်ခြင်းကို စည်းချက်ညီညီလှမ်းရင်း လေလွင့်နေတဲ့ကောင်
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ရုပ်ရှင်လက်မှတ်အဟောင်းကလည်း ညီမလေး
အချစ်နဲ့အလွမ်းဟာ ထိမရကိုင်မရစိတ္တဇနာမ်ဆိုတာ လက်မခံနိုင်ဘူး။
လေလိုပဲလွင့်လွင့်နေတဲ့ လေလွင့်နေတဲ့ကောင်။ ။
ငါတော့ ခုထိမတွေ့ဖူးသေးတာ အမှန်။
(ကျနော့်သူငယ်ချင်း ၀ိုင် ရဲ့ခံစားချက်တွေအတွက် အားပေးချင်တဲ့ကဗျာပါ)
ကိုယ်အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေ တကယ့်ကို အကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့ချိန်မှာ တလောကလုံး ရှိရှိသမျှ ပန်းတွေ ဖူးပွင့်ကြိုင်လှိုင်လာ…. ကျေးငှက်ပေါင်းစုံ တီတာခွန်းချိုလာ…… အင်း… ကိုယ့်စ်ိတ်ထဲမှာတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ထဲကို သူ့ရဲ့ဘ၀လေး မြဲမြဲစွဲစွဲတွယ်ယှက်နေခဲ့ပြီဆိုတာ သေချာခဲ့တုန်းကပေါ့။
တကယ်တော့ အချစ်နဲ့ကြုံတွေ့နေသူတိုင်းဟာ အရူးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင် အားလုံးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု များများစားစားရှိတဲ့ ရူးသွပ်နေသူတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးလည်း ရူးခဲ့ကြဖူးမှာပါ။ အဲဒီလို ရူးခဲ့ကြသူတိုင်းဟာလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခံစားခဲ့ရတာမှန်သမျှကို အမြတ်တနိုး ဒါမှမဟုတ် အမှတ်တရ သိမ်းဆည်း သိုလှောင်ထားခဲ့ကြသူချည်းပါပဲ။ အရမ်းချစ်တတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း တွေ့ဖူးတယ်။ ချစ်သူရဲ့ ချွေးနံ့သင်းတဲ့ တစ်ရှူးစကို သိမ်းထားကြသူတွေ….
ချစ်သူရဲ့ ဆံစလေးတွေကိုမှ တိပ်နဲ့ကပ်ပြီး ယုယုယင်ယင်သိမ်းဆည်းကြသူတွေ….
အားလုံးဟာ အချစ်အတွက် အမြင့်မားဆုံး ထိုးတက်ပျံသန်း…. အတောက်ပဆုံး လောင်ကျွမ်းလင်းဝင်းခဲ့ကြ……
ဘေးလူတွေအမြင်မှာ ဒါဟာ ရူးသွပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာ မှန်ပေမယ့် ကာယကံရှင်အတွက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူရဲကောင်းအဖြစ် ရဲရဲဝင့်ဝင့်မှတ်ကျောက်တင်ပစ်ကြတဲ့ မဟာအောင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ရူးသွပ်တယ်…. အချစ်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာ သိမ်မွေ့စွာပဲ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သူရဲ့မျက်နှာလေးကို မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်ရုံနဲ့ ကိုယ့်ရှေ့ကပျောက်ဆုံးသွားတော့မယ့်အတိုင်း ကြည်ကြည်နူးနူး ကြည့်နေခဲ့ဖူးတယ်။ ချစ်သူကို ရင်ခွင်ထဲထားပြီး တိတ်တိတ်ကလေး သနားညှာတာနေခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါဟာ တကယ့်ကို အကြီးစားရူးသွပ်မှုဆိုရင်လည်း အဲဒီရူးသွပ်မှုကိုပဲ ကိုယ့်ဘ၀ထဲ တွယ်တွယ်မက်မက်ထည့်ပြီး သွားလေရာ ထည့်ထားမိမှာပါပဲ။
ရိုးရိုးသားသားလေးပဲ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ အချစ်အရာမြောက်ပါတယ်။
ဒါဟာ အရမ်းရိုးရှင်းတယ်… တပြိုင်တည်းမှာပဲ ဘယ်သူမှလိုက်မမှီနိုင်တဲ့ ဆန်းကြယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့ပြန်ရော။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ဘယ်လိုနောက်ဆုံးပေါ်မှန်သမျှ ဆန်းသစ်မှုမှန်သမျှကိုမှ မကြောက်တတ်တဲ့ အချစ်ရဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်ဖြစ်နေခဲ့ပြန်တယ်။
တကယ့်အချစ်စစ်ဟာ စိုးရိမ်စိတ်ခပ်များများပါဝင်တဲ့ ပူပင်ကြောင့်ကြမှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ လိုချင်တဲ့ အချစ်ကို မရခင်က စိုးရိမ်ကြသလို…. ချစ်ကြပြန်ပြီဆိုတော့လည်း ခွဲခွာခြင်းဆိုတဲ့ ကန့်လန့်ကာကြီးကို ကြောက်ရွံ့ရပြန်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့အရာဟာ တခါတလေ စကားလုံးပေါင်းများစွာနဲ့ တည်မှီတာတောင် မပြည့်စုံပါဘူး။
တခါတခါကျပြန်တော့လည်း ဘာမှပြောစရာမရှိလောက်အောင်ကို စကားလုံးနည်းပါးနေတတ်ခဲ့ပါတယ်။
နတ်ဘုရား….. စေတန်….. မနက်ဖြန် …… လက်ကိုင်ပ၀ါ…. စကားလုံး..... အရာရာ….
ဘာမဆိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့လည်း ကိုယ်တို့အားလုံး အဲဒီမဆုံးနိုင်တဲ့ မျက်လှည့်ပွဲအောက်မှာပဲ ပြန်လှည့်ထွက်လို့မရအောင်… ပြန်မထွက်ချင်အောင် ရူးသွပ်စိမ်းလန်းနေခဲ့ကြတာ….. မဆန်းပြားလှတော့ပါဘူးကွယ်။ ရေးသူ ►